Athini amaphiko esiCwangciso sakho seNtengiso? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 1, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Izolo, ndiqale ukufunda incwadi kaNick Carter Imizuzwana elishumi elinambini: Phakamisa iimfuno zakho zeshishini. Ndiyayithanda into efana neshishini njengenqwelomoya kwincwadi kwaye uNick uyichaze kakuhle.
Enye yeengxoxo zokuqala yile nyusa. I-NASA ichaza ukunyusa ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuphakamisa ngamandla aphikisana ngqo nobunzima bendiza kwaye ibambe inqwelomoya emoyeni. Ukuphakamisa kuveliswa yiyo yonke indawo yenqwelomoya, kodwa uninzi lokuphakamisa kwinqwelo moya eliqhelekileyo lwenziwa ngamaphiko. Ukuphakamisa amandla oomatshini asemoyeni aveliswa kukushukuma kwenqwelomoya emoyeni. Kuba ilifti ngamandla, bubungakanani bevektha, obunobukhulu kunye nolwalathiso oluhambelana nayo. Izenzo zokuphakamisa phakathi koxinzelelo lwento kwaye ijolise ngokungqalileyo kwicala lokuhamba.
Izolo ebusuku, mna nomnye umnini-shishini siye sasela kwaye sixoxa ngamandla kunye nokugxila ebesinako namashishini ethu. Omabini amashishini ethu aqhuba kakuhle, kodwa sithathe utyalo-mali olumangalisayo kuthi. Andiqondi ukuba kukho umntu oqondayo, de baqale ishishini, ukuba lifuna ntoni. Ukusuka ekuntywiliseleni kulondolozo, ukuya kuxinzelelo malunga nokuhamba kwemali, ukuya kwimicimbi yabasebenzi, ukuthengisa, ukubalwa kwemali kunye neerhafu… abantu abaqondi ukuba ngelixesha sisebenza kubathengi bethu lifuna amandla onke okugqibela.
Kufuneka sigcine amandla kangangoko ukuze sihlale sinee-injini eziqhubayo kwaye neshishini linalo nyusa. Iimbambano kunye neengxaki azinakukhutshwa kuba oko kuchitha amandla amaninzi kunokuba sinokufikelela. Khawufane ucinge inqwelomoya apho uchithe amafutha amaninzi ukuyenza ukuba ifike kwindawo oya kuyo… uya konakala. Ngenxa yoko, ndiye ndenza isigqibo ngakumbi kwaye ndakhawuleza ngeempendulo kunye nezenzo kunangaphambili.
Elevator luphawu olusisiseko lwazo zonke izinto zokubhabha nezibhabhayo. Njengoko ndijonga ishishini lam, nyusa of Highbridge ngaphandle kwamathandabuzo, le bhlog. Ukusekwa kwale bhlog kukhokelele kubaphulaphuli bethu, incwadi yam, ukubandakanyeka ekuthetheni kwam, umsebenzi wam neenkampani zeshishini kunye neenkampani zetekhnoloji kwilizwe liphela, kunye nokuqesha abasebenzi bethu kunye nomsebenzi wethu oqhubekayo. Ukuba bekukho amaphiko kwishishini lam, baya kuba yile bhlog.
Ke, nokuba usuku lubi kangakanani, ndinamandla angakanani endiwasebenzisileyo, uthini umthwalo wam womsebenzi, yimalini esebhankini kwaye yeyiphi na imiba yabathengi esinokuba nayo, ndihlala ndiqinisekisa ukuba ishishini lam nyusa. Ndiyazi ukuba zininzi iinkcukacha zokuhamba ngenqwelomoya endimele ndizikhathalele (kwaye incwadi kaNick iyandinceda ukugxila kuloo), kodwa andisoze ndilibale isiseko sawo wonke umsebenzi wethu-le bhlog. Le bhlogi isivumele ukuba sibhabhe kwaye siya kusizisa naphina apho sifuna ukuya khona. Kuya kufuneka ndiqinisekise ukuba ndizigcina iinjini ziqhuba kwaye ziyaqhubeka nokusigcina sinyuka.
Athini amaphiko eshishini lakho?
Jun 3, 2013 ngo-9:29 AM
Enkosi. luncedo kakhulu kum